Uploaded by zarmani0
အသက်ငယ်ငယ် ရမ္မကြ် ကွယ်
Typed by Kaungmyattun99 ( http://achittatkatho.net)
အသက်ငယ်ငယ် ရမ္မကြ် ကွယ်
ရေး - အမည်မသိ
Typed by Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်)
“ အကြော် ပူပူနွေးနွေး လေးတွေနော်…”
လမ်းပေါ်လျှောက်လာသော လမ်းသွားလမ်းလာ မိန်းမကြီးနှစ်ယောက် ရှေ့မှ ဖြတ်သွားတာ တွေ့၍
မသိန်းရီက အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် အကြော်အော်ရောင်းလိုက်သည်..။ မိန်းမကြီးနှစ်ယောက်က
ဆိုက်ကားပေါ် ထိုင်၍ နေသော အညာသားက သိန်းရီကို မေးလိုက်ရင်း ဆိုက်ကားပေါ်မှ ဆင်း၍
ဆိုက်ကားကို လမ်းမပေါ်သို့ တွန်းတင်လိုက်သည်.။
“ ရပ်ကွက်တွေထဲ လှည့်ပြီး ရောင်းကြည့်အုံးပေါ့ဟ…ငါတော့ ကားဂိတ်ဖက်သွားပြီး
“ အေး..ခဏတော့ ရောင်းကြည့်အုံးမယ် ဟာ…မကုန်တော့လည်း လှည့်ရောင်းရမှာပေါ့…”
အညာသား ဆိုက်ကားနင်း၍ ထွက်သွားပြီ..။ ဆိက
ုကားဂိတ်ထဲတွင် ဆိုက်ကားတစ်စီးမှ မရှိတော့..။
လမ်းဘေးတွင် ချထားသော ထင်းရှူးသေတ္တာ အကျိုးလေးပေါ်တွင် အကြော်ဗန်း တင်ပြီး ရောင်းနေသော
သိန်းရီ တစ်ယောက်ထဲသာ ဆိက
ုကားဂိတ်နားတွင် ကျန်တော့သည်..။
။ မူလက ဖြူသော အသားအရည်က နေလောင်ထားသဖြင့် နီမြန်းနေသည်.။ သိန်းရီ သက်ပြင်းအခါခါ ချနေတုံး ရှေ့သို့ စက်ဘီးတစ်စီး ထိုးရပ်လာသည်.။ ညစ်ထပ်၍ မနေပဲ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ဖြူဖြူစင်စင် ဖြစ်သည်....။ သိန်းရီ မျက်လွှာပင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဦးမြင့်စိုးကြီး သူ့ကို ပြုံးဖြီးဖြီးဖြင့် ကြည့်နေသည်…။ “ ရောင်းကောင်းလားဟ….သိန်းရီ.။ သိန်းရီ အသက် ၃၀ သာ ရှိသေးသည်..။ အခု သိန်းရီ၏ သားလေးက မူလတန်းကျောင်း စတက်နေပြီ ဖြစ်သည်.” .။ ဝတ်ထားသော အဝတ်အစားတွေက အရောင်လွင့်နေပြီ..။ သိန်းရီကို လှည့်ကြည့်လိုက်သော ကုလားကြီး၏ မျက်လုံးများက စူးစူးဝါးဝါး နိုင်လှသည် .. ကောင်မလေး…” ကုလားကြီးက လက်ပတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်ြ့ပီး သိန်းရီကို လှည့်ကြည့်ကာ ပြောသည် ..။ ခန္ဓာကိုယ်က လုံးကြီးပေါက်လှ အချိုးကျပြီး၊ နှာတံပေါ်ပေါ် မျက်ခုံးကောင်းကောင်းဖြင့် လှပတောင့်တင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်.။ ဒီနေ့ ညနေစာနှင့် မနက်ဖြန် မနက်စာ ထမင်းစားဖို့ နှင့် မနက်ပြန်ရင်းဖို့ဆိုတာတွေက အကြော်ဗန်းထဲမှ အကြော်တွေ ကုန်မှ ဖြစ်မည်.။ မအာ မိသဖြင့် သိန်းရီ ပေါက်ဂဏန်းနှင့် လွဲခဲ့ရသည်.။ အပိုင်ကွက်ရ၍ နှစ်လုံးထိုးလိုက်တာ ခြောက်ရာ ကုန်သွားသည်....။ အိမ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ခိုင်းနေသော ဆိုက်ကားသမား ကျောက်ခဲနှင့် သိန်းရီ လိုက်ပြေးသဖြင့် ပစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်. ဘယ်နှစ်နာရီ ရှိပလဲ…” ရှေ့မှ ဖြတ်လျှောက်သွားသော အသက်ငါးဆယ်လောက်ရှိသည့် ကုလားကြီးတစ်ယောက်ကို သိန်းရီ လှမ်းမေးလိုက်သည်.။ မနက်ထဲက ရောင်းနေတာ ခုနစ်ရာဖိုးသာ ရောင်းရသေးသည်..။ ရသော လျော်ကြေးလေးဖြင့် သိန်းရီက မြို့ဆင်ခြေဖုံးလေးတွင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေး တစ်လုံး ဖန်တီးပြီး သားအမိနှစ်ယောက် နေထိုင်ခဲ့သည်...။ ကလေးတစ်ယောက်ရပြီး ကလေး သုံးနှစ်သား အရောက်မှာပင် ကျောက်ခဲ ကားတိုက်ခံရကာ သေဆုံးသွားခဲ့သည်.။ “ နှစ်နာရီ ခွဲပြီ…..။ သိန်းရီက မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ ရှေ့မှ အကြော်ဗန်းကို ကြည့်နေလိုကသ်ည် .။ သိန်းရီ မိဘများက တွံတေးမြို့တွင် လူချမ်းသာများ ဖြစ်သည်.။ ရှေ့ အကြော်ဗန်းထဲမှ အကြော်များကို ကြည့်ရင်း သိန်းရီ သက်ပြင်းချသည်.။ ကျောက်ခဲက သိန်းရီကို သူ့ဖက်က ဆွေမျိုးများ ရှိရာ ကော့မှူးမြို့သို့ ခေါ်လာပြီး ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်..။ ပေါ်ပေါ်တင်တင် မျက်လုံးကြီးဖြင့် သိသိသာသာကြီး ရပ်ကြည့်နေပြီးမှ ကုလားကြီးက ရှေ့ဘက်သို့ ဆက်လျှောက်သွားသည်...။ ဒါမျိုးတွေက သိန်းရီအဖို့ မြင်ပါများတော့ ရိုးနေပြီ ..“ ဦးလေးကြီး …..
ဦးလေး.။ မွှေးမွှေးက အသက် ၁၈ နှစ်လောက်ရှိပြီ.....။ ဒါပေမယ့် အခါမဟုတ် ရွာသောမိုးက မသဲပေမယ့် ရွှဲအောင်တော့ ...။ ဦးမြင့်စိုးတွင် သားတစ်ယောက် ၊ သမီးတစ်ယောက် ရှိသည်..။ ဒါပေမယ့် လှကျော်ကြောင့် မသိန်းရီက မွှေးမွှေးကို ကြည့်မရဖြစ်လာခဲ့သည် .။ နေတာကလည်း တစ်ရပ်ကွက်ထဲဆိုတော့ မွှေးမွှေးနဲ့ သိန်းရီက အရင်တုန်းက ညီအစ်မသဖွယ် ခင်မင်ကြသည်.။ သိန်းရီယောက်ျား ကျောက်ခဲ သေသွားပြီးနောက် လှကျော်က သိန်းရီတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့၍ ကြည့်ရှုထားခဲ့တာ ဖြစ်သည်.။ သူမ၏ ရှေ့မှ ဦးမြင့်စိုး ထွက်သွားတော့ သိန်းရီ သက်ပြင်း ချလိုက်မိသည်..လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က ထလာတာဟ…မစားသေးဘူး…သွားအုံးမယ်.“ မကောင်းပါဘူး..ရာ….။ သိန်းရီယောက်ျား ရှိစဉ်ထဲကလည်း ဦးမြင့်စိုး ထံ ဆုိက်ကားငှား၍ နင်းနေသည်မို့ အဝင်အထွက် ရှိကာ ခင်မင်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်.။ သက်ပြင်းတွေ အခါခါ ချရင်း သိန်းရီ အကြော်ဗန်းကို ခေါင်းပေါ်ရွက်တင်လိုက်ကာ လမ်းမပေါ် တက်လိုက်သည်.။ ဦးမြင့်စိုးက မုဆိုးဖိုကြီးဖြစ်ပြီး ဆိုက်ကား အစီး ၂၀ လောက်ပိုင်သော အုံနာကြီး ဖြစ်သည်...။ စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ကျေးဇူးကလဲ ရှိ ၊ နေ့စဉ်လဲ တွေ့မြင်နေရ လှကျော်ကလည်း လက်ရဲလေတော့ သိန်းရီနှင့် တိတ်တိတ်ပုန်း ငြိစွန်းခဲ့ရလေသည် .......။ ဒါကြောင့် သိန်းရီက မွှေးမွှေးကို ကြည့်မရဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်.။ လှကျော်ဆိုသူက ဦးမြင့်စိုး၏ တပည့် ဆိုက်ကားတွေကို စီမံအုပ်ချုပ်ရသည့် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်..။ သိန်းရီနှင့် အသက်တူရွယ်တူ ပင်ဖြစ်သည်.” အကြော်သာ မဝယ်သည်.။ “ ဖြောက် ဖြောက် ဖြောက်….ဝယ်သွားပါအုံးလား…” “ ငါ အခုဘဲ. သိန်းရီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကိုတော့ သိမ်းကြုံးပြီး စားမတတ် ဝါးမတတ် လူကို အနေရခက်အောင်ပင် ကြည့်ငမ်းသွားသည်.။ သားက အိမ်ထောင်ခွဲသွားပြီဖြစ်ပြီး သမီး မွှေးမွှေးကတော့ အပျိုကြီးဖားဖား ဖြစ်နေပြီ..။ လှကျော်က မွှေးမွှေးဆိုလျှင် သဲသဲလှုပ်နေသည်.။ အသားလေးက ညိုစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သော်လည်း ချောချောလှလှလေး ဖြစ်သည်..။ သိန်းရီ ခြေလှမ်းကိုသာ ခပ်သွက်သွက်လှမ်းလိုက်ရသည်..။ ဒါကြောင့် သိန်းရီက အတော်ပင် မကြည်မလင် ဖြစ်နေရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်.။ သိန်းရီကို နောက်သလိုပြောင်သလိုနှင့် သူနှင့် ယူဖို့ စကားတောင် ပြောခဲ့ဖူးသည် .။ လှကျော်ဆိုလျှင် မွှေးမွှေးကလည်း အကဲပါသည်..” “ ဟယ်…တော့…မိုးရွာပြီ…” နွေခေါင်ခေါင်ဖြစ်၍ အုပ်စရာဆောင်းစရာက မပါ...
ရွာပစ်လိုက်သည်.။ မိုးရေများနှင့် သိန်းရီ၏ မျက်ရည်တို့က သူမ၏ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင် ရောထွေးကုန်ကြရလေတော့သည်...ငါက သူဌေးမှ မဟုတ်တာ.ငွေက ငါးထောင်ကြီးတောင်....” သိန်းရီ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရင်သွားသည်..။ သူမကို စိုက်ကြည့်နေသော ဦးမြင့်စိုးက ပြုံးလိုက်သည်.။ ညနေလေးနာရီ ထိုးလို့ သားလေး ကျောင်းဆင်းလာလျှင် ဆာလာမည်...မများမှန်း .။ နောက်နေ့ မနက်စာဆိုရင် ဝေးရော.။ ထိုင်နေရာမှ ကမန်းကတန်း ထ၍ ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေကို ဖွင့်ကြည့်သည်.။ ပြီးတော့ ဦးမြင့်စိုးကို နားမလည်နိုင်သော မျက်လုံးအစုံဖြင့် ကြည့်လိုက်မိသည်.... ကျမ သိပါတယ်..ညစာနဲ့ မနက်စာလဲ ချက်ရအုံးမယ်.....။ ထမင်းကျန်နှင့် ဟင်းကျန်တို့ကို ပန်းကန်နှင့်ထည့်၍ ထမင်းစားပွဲ အဝိုင်းလေးပေါ် တင်ပြီး ကော်ပန်းကန်လေးတွေနှင့် အုပ်လိုက်သည်.နင့်ဥစ္စာ ကြည့်လဲလုပ်ပါအုံး.။ သိန်းရီ ရေစိုအဝတ်တွေကို မလဲနိုင်သေး.။ လက်သီးဆုတ်သာသာ ထမင်းကြမ်းတစ်ခဲနှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်းက လက်ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံးနှစ်လုံးစာ လောက်ရှိသည်.......” “ ဒါနဲ့ လှကျော်က နင့်ကို ငွေ ပေးမထားခဲ့ဘူးလား.။ ခါတိုင်းဆို သိန်းရီ မောမောနှင့်ပြန်လာပြီး ဒီထမင်းကြမ်းကို စား၍ ညနေစာ ချက်တတ်သည် .။ ညနေစာလည်း ချက်စရာ မရှိ.။ ====================+======================== “ သိန်းရီ ရာ..။ သိန်းရီ အရင်းပြုတ်ပြီ.။ သူမအကြံကတော့ ဦးမြင့်စိုးထံ ငွေငါးထောင်လောက် ချေးရန် ရည်ရွယ်၍ ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်.လား…” “ ကျမယူတာ..” “ ရှင်……..။ သူ့အဒေါ်ဆုံးလို့ ကျိုက်ထိုကို သွားနေသည်.။ လှကျော်ကလည်း ကော့မှူးတွင် မရှိ..။ ဒီနေ့တော့ ဗိုက်ထဲက ဆာနေပေမယ့် မစားတော့..ပြီးတော့ မနက်ဖြန် ပြန်ရင်းရမှာလဲ ရှိသေးလို့ပါ...။ “ လှကျော်နဲ့ နင် .။ ------------------------------------------x-----------------------------------------------မသိန်းရီ အိမ်ရောက်တော့ အကြော်ဗန်းကို အိမ်ပေါ်ချလိုက်ပြီး ချုံးပွဲချ၍ ငိုချလိုက်မိသည်. လှကျော်ယောက်ဖ ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်မှာ ချိန်း ချိန်းတွေ့နေတာ ငါသိတယ်…” ..။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားလဲကာ ထီးဟောင်းလေးကို ဆောင်း၍ သိန်းရီထွက်လာခဲ့သည်.၊ ဦးလေးရာ.
။ “ အို….။ လှကျော်နှင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း လူမလစ်၍ တစ်ပတ်တွင် တစ်ခါတွေ့ဖို့ မလွယ်.။ ဒီတော့ သွေးသားတွေက ပူနွေးတက်ကြွနေရသည်..။ သိန်းရီ ကြက်သေ သေပြီး ဦးမြင့်စိုးကို ငေး၍ နေသည်.သိလား...” သိန်းရီက တရိုတသေ လှမ်းယူလိုက်သော လက်ထဲသို့ ငါးထောင်တန်ကို ထည့်၍ သူမလက်ဖျားလေးကို လှမ်းဆုတ်လိုက်ပြီး ဦးမြင့်စိုးက သိန်းရီကို ဆွဲ၍ယူကာ သိုင်းဖက်လိုက်သည်.ရော့…....“ ရှင်…” “ ဦးလေးကလဲ...။ အတွင်းခန်းထဲ ရောက်တော့ ဦးမြင့်စိုးက သူ့အင်္ကျီအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်ပြီး ငါးထောင်တန် တစ်ရွက် ထုတ်လိုက်သည်.၊ ပေးမှာဖြင့် ပေးစမ်းပါ…ကျမ သားလေး ခုချိန်ဆို အိမ်ပြန်ရောက်နေလောက်ပြီ…ဆာလာမှာ…” သိန်းရီ မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲနေပေမယ့် အားယူပြီး မဟုတ်သလိုနှင့် ပြောသည်..နင်ကလဲ….။ “ ခက်လိုက်တာဟာ…. ဦးလေးကလည်း လွှတ်ပါအုံး…” သိန်းရီ ကတုန်ကရင်ဖြစ်နေသည်.ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့လို့…နောက်လိုရင် ခုလိုပဲ ငါ့ဆီလာခဲ့...” ဦးမြင့်စိုးက အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ရှေ့မှ ဝင်ပြီး ခေါ်တော့ သိန်းရီလည်း ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ နောက်မှနေ၍ လိုက်ဝင်သွားသည်..။ “ ဒီကိစ္စ.” “ ရှင်….” သူမပါးပြင်ကို နမ်းရင်း ဦးမြင့်စိုးက ပြောသည်.။ “ နင်…ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့နော်.၊ ပိုက်ဆံလည်း ပြန်မပေးနဲ့…” .ကဲ…လာ…...။ သိန်းရီ ယောက်ျားသေတာ သုံးနှစ်ရှိပြီ.။ “ ကဲ…...မဟုတ်တာတွေ …လျှောက်ပြောနေတယ်...
.စကားတပြောပြောနှင့် ဦးမြင့်စိုး၏ လက်တွေက သိန်းရီတစ်ကိုယ်လုံးကို ထင်သလို ကိုင်ပွတ်နေပြီ ..။ “ လာ…ရှေ့တိုး…အေး….။ နွမ်းကျေလာသည်.အား…....လှဲလိုက်နော်…” သိန်းရီ စိတ်ညှို့ခံထားရသလို ဦးမြင့်စိုးပြောသလို လုပ်နေမိသည်.။ သိန်းရီ ဟုတ်နိုးနိုးဖြင့် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသည်.။ သိန်းရီ၏ တသားမွေး တသွေးလှ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ လီးဆက်ကြဲ သဖြင့် ဖူးဖူးပြည့်ပြည့်ကြီး ပြောင်းဝင်းဖွေးဥနေသည် .။ ပွင့်ရိုက်ပါတိတ် ထမီနွမ်းနွမ်းလေးက ခါးလေးဆီသို့ လန်တက်သွားသည် .။ သိန်းရီ၏ လက်ထဲမှ ငါးထောင်တန် အသစ်ချပ်ချွတ်လေးမှာ ချွေးစိုလာသည်.ဟင့်အင်း……” “ မဟုတ်ဘူးလေ…ခဏလေးနဲ့ ငွေငါးထောင် ရတာ…ဒီကိစ္စကလဲ…နင်နဲ့ငါပဲ သိတာလေဟာ…” ဦးမြင့်စိုး၏ ထောင်ထနေသော ပုဆိုးထဲမှ လီးချောင်းကြီးက သိန်းရီ၏ ခါးအောက်ပိုင်းကို ဟိုထိုးဒီထိုးဖြင့် မနေတတ်တော့အောင် လုပ်နေသည်..အေး…” သိန်းရီ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို အောက်သွားလေးဖြင့် ကိုကထ်ားပြီး မျက်စေ့အစုံကို တင်းတင်းလေး မှေးမှိတ်ထားလိုက်မိတော့သည်.။ “ ဟာ….။ သိန်းရီ စောက်ဖုတ်ကြီးက လက်တစ်အုပ်မက ထွားကြိုင်းဖောင်းကားနေပေရာ လိုးခါနီး၌ လီးကို ဖြဲပြီးမှ လိုးသွင်းရသည်.ဟင့်အင်း….။ သိန်းရီ ဖြတ်ခနဲ သတိဝင်လာသည်...” ဦးမြင့်စိုး မျက်နှာကြီး ဝင်းလက်သွားသည်..။ “ ဗြစ်…ဖွတ်…...။ ဦးမြင့်စိုးက ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်သည်.။ “ ပေါင်…..ဖွတ်……” .....ပေါင် ကားထား….။ “ အို….။ သူ့လီးကြီးက ထိပ်လန်နေသော်လည်း ဒစ်က အကုန်အစင် မပေါ်..
” “ အင်း…ဟင်း……” သိန်းရီ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ခေါင်းငြိ်မ့်ပြလိုက်သည်.။ ဦးမြင့်စိုးက ထမီစကို အတင်းပြန်ဆွဲတင်ရင်း ဖိလိုးသည်.ဗြစ်….ဟင်း……” ဦးမြင့်စိုးက အနားမှ ခေါင်းအုံးအဟောင်းလေး တစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး သိန်းရီ၏ တင်ပါးအောက်သို့ ထိုးထည့် ခုလိုက်သည်....။ သိန်းရီစောက်ဖုတ်ကြီး နီရဲလာသည်..အ….။ သူမ၏ ခါးအောက်သို့ ခေါင်းအုံးရောက်သွားသောအခါ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ပို၍ တင်းကားပြဲလန်သွားလေရာ ဦးမြင့်စိုးလီးကြီး ဝင်နေသည်ကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး မြင်နေရသည်.သိန်းရီ….။ “ ဘွတ်…..အိုး…....စွပ်…” “ အင့်….အင်း….။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များလည်း စိုသထက်စိုကာ အန်ထွက်စီးကျလာသည် .။ စောက်မွှေးလေးများ ဖုံးဖိသည်အထိ ထမီကို ထပ်ပြီး ဆွဲချရင်း သိန်းရီ မျက်လုံးကလေးများ မှိတ်ပြီး ညီးသည်...။ “ ဗြစ်….ဘွပ်…စွပ်…...။ သိန်းရီက ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချကာ ခါးလေးကို ကော့ပေးလိုက်သည်.ဟင်း..။ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ခပ်တင်းတင်းဝင်နေသော လီးကြီးကို မျက်လုံးဖွင့်၍ လှမ်းကြည့်ရင်း ဖင်ကို ရှေ့သို့ တိုးပေးလိုက်မိသည်..။ ဦးမြင့်စိုးကလည်း ဖိသွင်းသည်..။ ဦးမြင့်စိုးက မြိန်ရေယှက်ရေကြီး လိုးသွင်းနေသည်..ပြွတ်…..” “ ဟင့်အင်း…” သိန်းရီ မျက်လုံးလေးကို မှိတ်ထားရင်း ခေါင်းခါပြသည်.။ “ အရမ်းကြပ်နေလား…ဟင်…..။ ဦးမြင့်စိုးက စောက်စေ့ရဲရဲလေးကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ကလိရင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ သိန်းရီမှာ .“ ဝင်လား..ကျွတ်ကျွတ်….ဖွတ်……ဖွတ်……” “ အို့…...။ သိန်းရီ စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း ရွှဲနေပြီ.အ……” မကြပ်သော်လည်း လီးကြီးက ရှည်လျားလှသည်..
.။ “ အီး….။ လှကျော်၏ လီးကြီးမှာ တဖြည်းဖြည်း သံမဏိချောင်းကြီးလို မာကျောတောင်မတ်လာသည် .စွပ်….။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်၍ ဆုတ်၍ ပွတ်ချေပေးလိုက်တိုင်း သိန်းရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကြွကြွတက်လာပြီး လှိုကက်နဲ လှိုက်ကနဲ ရွရွသွားသည်....။ နွေးထွေးအိစက်သော နို့အုံအတွေ့က လှကျော်၏ စိတ်ကို ကြွသထက်ကြွအောင် နှိုးဆွနေသည်.” မျက်စေ့ကို တင်းတင်းမှိတ်မြဲ မှိတ်ထားရင်း အသဲခိုက်အောင် တိုးဝင်သွားသော လီးထိပ်ကြီးက သားအိမ်ဝကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြီး ထိုးတိုက်မိသွားရာ မျက်လုံးထဲ မီးဝင်းဝင်းတောက်သွားမိသည် .။ ကျပ်ပြားဝိုင်းခန့် ရှိသော အညိုကွက်လေး အလယ်တဲ့တဲ့ရှိ နီညိုေ၇ာင် နို့သီးခေါင်း တောင့်တောင့်လေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မနှင့် ညှပ်ကာ လှိမ့်ချေပေးလိုက်သည်.အိ…..။ နို့နှင့် စောက်ဖုတ်မှာ ကာမအကြော ချိတ်ဆက်မှုရှိပုံရသည်.အရမ်း ထိတာပဲ………..ဘွတ်…..အ….။ လှကျော်၏ .။ သိန်းရီ၏ လက်တွေက တောင်မတ်စပြုနေသော လှကျော်၏ လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ အုပ်ကိုင်၍ ခပ်ဖွဖွလေး ဆုတ်ညှစ်ပေးလိုက်သည်.။ လှကျော်က နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီး၏ အောက်ခြေကို လက်ဖနောင့်နှင့် ပင့်၍ လက်ချောင်းများနှင့် ကုတ်ကာ ကုတ်ကာ ဆုတ်နယ်ပေးသည်.” မရည်ရွယ်ပဲ နှုတ်မှ လွှတ်ကနဲ ပြောလိုက်မိသည်....အလိုးမခံရတာ ကြာပြီက တစ်ကြောင်း၊ အလိုးကျွမ်းကျင်သော ဦးမြင့်စိုး၏ အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသပ်တို့က တစ်ကြောင်း အကောင်းကြီးကောင်းကာ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲ ဦးမြင့်စိုး၏ ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်ဆွဲရင်း အောက်မှ ကော့ကော့ပေးလိုက်မိတော့သည်.။ စောက်စေ့ငုတ်ပြူးပြူးကြီးမှာလည်း တဆတ်ဆတ်နှင့် လှုပ်ခါလာသည်..။ ============================================ ခရီးထွက်သွားရတာ ၁၀ ရက်လောက်ကြာပြီးမှ ပြန်လာရတော့ လှကျော်တစ်ယောက် သိန်းရီကို အပြတ်လိုးချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေသဖြင့် သိန်းရီနှင့် တွေ့ဆုံရန် ချိန်းလိုက်သည် ...။ မပျော့မမာ တင်းတင်းအိအိ နို့အုံကြီးနှစ်မွှာက ကိုင်လို့ကောင်းလှသည်...။ သိန်းရီ၏ လှပဝိုင်းစက်သော နို့အုံကြီး နှစ်လုံးကို ခပ်ရွရွလေး ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေရင်း ခပ်ဖွဖွလေး ရှိုက်နမ်းလိုက်သည်..။ “ ဘွတ်….။ နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် ဆောင့်လိုးကြရင်း သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်ကြတော့သည်.။ ပြီးတော့ သွေးတွေဆူဝေလာကာ ခပ်ဖွဖွ ဆုတ်ကိုင်ပေးနေရာမှ ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဂွင်းတိုက်သလို ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပေးလိုက်သည်....ရှီး….ပြွတ်…” “ အင့်…အင့်…အင်း…အမလေး…ကျွတ်…ကျွတ်…..
။ လှကျော်က သိန်းရီ၏ ထမီကို ကွင်းလုံးကျွတ်သွားအောင် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်.။ ..။ တင်းရင်းမို့မောက်နေပြီး ဆုပ်ကိုင်ရပွတ်ချေရသည်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေး နုနုညက်ညက် ရှိလွန်းလှသည် ..” “ မဟုတ်ပါဘူးဟာ…ငါက နင့်ကို ပဲ စွဲနေတာပါဟာ…” သိန်းရီ၏ မျက်နှာလေး ပြုံးယောင် သန်းသွားသည်...။ သိန်းရီတစ်ယောက် လှကျော်၏ ယုယမှုအောက်ဝယ် တလူးလူး တလွန့်လွန့်နှင့် လှိုက်မောစွာ နစ်မျော သာယာနေမိသည်..မပြောလိုက်ချင်ဘူး..ဟွန်း….။ ထမီက တင်ပဆုံမို့မို့ကြီးနှင့် ငြိနေသဖြင့် သိန်းရီက ကိုယ်ကို ကြွပေးလိုက်ရသည်.” “ အော်…ဒါကတော့ဟာ…ဦးမြင့်စိုးက ငါ့အလုပ်ရှင်လေဟာ…သူခိုင်းတာ လုပ်ပေးရမှာပေါ့…” “ တော်စမ်းပါ…..ငါ နင့်ကို သတိရလိက်ုတာ ဟာ…” “ ဟွန့်…အပိုတွေ ပြောနေ…” “ တကယ်ပါဟ…” “ ဘာတကယ်လဲ….။ သိန်းရီမှာ ကလေးတစ်ယောက်အမေ ဆိုသော်လည်း သူမနို့တွေက ပျော့ဖတ်ဖတ်အိတွဲတွဲ မဟုတ် ...လက်နှစ်ဖက်က နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးစီ ပွတ်ချေဆုတ်ကိုင်ရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က သိန်းရီ၏ တင်သားကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်.။ လှကျော်တစ်ယောက် သိန်းရီ၏ နို့အုံကြီးတွေကို ကိုင်ရတာ အလွန်အရသာ တွေ့နေသည် ..။ လှကျော်က သိန်းရီ၏ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ် ကြီးနှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့ခပ်ကားကား ဖြစ်အောင် ဖြဲထားလိုက်သည်..ရောက်ရောက်ချင်းတော့ လာမတွေ့ပဲ မွှေးမွှေးကို စက်ဘီးနဲ့ တင်ပြီး ဈေး လိုက်ပို့နေတယ်..။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တစ်လုံးတခဲကြီး ဖြစ်နေသော သိန်းရီ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ခန္ဓာကိုယ် အလှတွင် လှကျော် တစ်ယောက် တမက်တမောကြီး နစ်မျောသွားသည်...။ လှကျော်က သိန်းရီကို ပက်လက်လေး ဖြစ်သွားအောင် ပွေ့သိပ်လှဲချလိုက်သည် .။ လှကျော်က သိန်းရီ၏ ဘေးတွင် တစောင်းလှဲအိပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ထားလိုက်သည် ..။ ခပ်ဖွဖွ ပွတ်ကာတစ်မျိုး၊ ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ချေ၍ တစ်ဖုံ၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်ဖိလှမ်းချေ၍ တစ်မျိုး မရိုးရအောင် နှိုးဆွပေးနေတော့သည်.မွှေးမွှေးကို ကြံနေတာ.။ သူ့လက်တွေက နို့အုံကြီးတဝိုက်နှင့် ဗိုက်သားပြင်တဝိုက်ကို စုံချည်ဆန်ချည် ပွတ်သပ်ပေးသည် .။ သိန်းရီကတော့ လှကျော်ပြုသမျှ သဘောကျ ကျေနပ်စွာ ခံယူနေပါတော့သည် .မသိဘူး မှတ်နေ….။ “ သိန်းရီ ရာ…..
။ ကြမ်းပြင်နှင့် လွတ်သွားသော ခါးအောက်သို့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံး သွင်းကာ ခုလိုက်သည်..။ “ ဗြစ်….” “ အား…....။ ယခုတော့ လီးအတွေ့အကြုံ အရေထူပြီး လီးအရသာ ကောင်းကောင်းကြီး သိထားသော သိန်းရီအဖို့ ရမ္မက်အရောင်တွေ တဝင်းဝင်းတလက်တလက် ထွက်နေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် အားပါးတရ အကြည့်ခံနေရသည်ကိုပင် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လျက် ရမ္မက်စိတ်တွေ ကြွသထက် ကြွနေပါသည် .။ လုံးဝ အလိုးမခံဖူးသော အပျိုရိုင်းလေးသာဆိုလျှင် ယခုလို စိတ်တိုင်းကျ ကြည့်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ....” “ အင်း….” ..။ “ ဖွတ်…ဗြစ်….။ ခါးလေးက အပေါ်သို့ မြောက်ကြွသွားသည်.။ သိန်းရီ၏ ဒူးနှစ်ချောင်းမှာ ထောင်နေပြီး ပေါင်တံဖွေးဖွေးကြီးတွေက ဘေးသို့ ကားထွက်နေသည် ....။ ခြေသလုံးနှစ်ဖက်ကို ပြန်ချ၍ လှကျော်က သိန်းရီ၏ ပေါင်ကြားတွင် ဒူးထောက်လိုက်သည် .။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရှိန်းဖိန်းကျဉ်တက်သွားရသည်.။ ထို့နောက် တရှိန်ထိုး ဆောင့်သွင်းထည့်လိုက်လေသည်.။ ပြီးတော့ သူ့လီးကြီးကို လက်နှင့် အသာကိုင်၍ ပြဲဟနေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးအတွင်းသို့ တစ်ရစ်ချင်း ဖိသွင်းလိုက်သည်...လှကျော်က ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရင်ဘတ်ဆီသို့ တိုးကပ်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖောင်းကြွ ပြူးအယ်လာသည်.။ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် မြုပ်ဝင်သွားစဉ် သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို သိန်းရီကိုယ်ပေါ်မှ ခွာ၍ ကြမ်းပြင်ပေါ်ထောက်လိုက်သည်.။ သိန်းရီက လှကျော်ကို တင်းကြပ်အောင် ဖက်ထားပြီး အံကြိတ်၍ တင်းခံသည် ..။ အပြင်နှုတ်ခမ်းသားတွေက အညိုရောင်သန်းနေသော်လည်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေမှာ အနီရောင်ပြေးလျက် နုအစ်၍ နေသည်.ဖွတ်….ပလွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်….....အမေ့….အ.။ လှကျော်က စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရကြည့်နေသည်.။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက အညိုရောင်သန်းနေပြီး ကြွရွနေသည်.အင့်….ပလွတ်….။ ထို့နောက် လှကျော်က အရပ်အနားမရှိ ဒလစပ် ဆောင့်ဆောင့် လိုးတော့သည်.ကျွတ်ကျွတ်…ကျွတ်……” လီးကြီးက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဆောင့်ဝင်လာရာ သိန်းရီမျက်လုံးထဲ မီးပွင့်ထွက်မတတ်ပင် ခံစားလိုက်ရသည်.အင့်…အ….။ လှကျော်က ကြည့်၍ အားရသွားတော့ သိန်းရီရင်ဘတ်ပေါ်တွန်းတင်ထားသော ခြေသလုံးနှစ်ဖက်ကို သူပခုံးပေါ် ချိတ်တင်လိုက်သည် ...။ စောက်ရေတို့ဖြင့် စိုလက်ဝင်းပြောင်နေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ ပြဲအာ၍ လိုးချင်စရာ ကောင်းလွန်းလှသည်.
အ…...ပါး…..အားပါး...။ ကာမအရသာထူးကြီးက သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံ၍ နေသည် .....။ “ ဟယ်….။ သိန်းရီပြီးသွားသည်ကို သိသော လှကျော်က မပြီးသေးသဖြင့် ဆက်၍ မနားတမ်း ဆက်တိုက် ဆောင့်သည်.အင်း…ရှီး…...။ မသိန်းရီခါး၌ ထမီက မရှိ.။ အရှိန်ကောင်းကောင်းနှင့် ဆက်ဆောင့်နေဆဲ.ဘွပ်…” “ နင့်ဟာကြီးက ကျယ်လာသလိုပဲ ..။ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သိန်းရီ တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ခါနေသည်.ပလွတ်….ဘု..ပြွတ်……” “ အ…ကျွတ်ကျွတ်….။ ခဏအကြာမှာတော့ လှကျော်၏ လီးချောင်းကြီး တစ်ခုလုံး ကျင်ဆိမ့်ယားတက်လာသည်..။ သိန်းရီ၏ ပခုံးကို တင်းတင်းကြီး ဆွဲကိုင်ဆုတ်ရင်း အပြီးသတ် ကြုံးထည့်လိုက်ကာ သုတ်ရည်ပူများကို သိန်းရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်..။ ပြီးသွား၍ သုတ်ရေတွေ ထွက်နေဆဲတွင် အဆက်မပြတ် ဆောင့်လိုးခံနေရသည့်အတွက် သိန်းရီတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာပြင်ထဲ မြောက်တက်သွားသည်ဟုပင် ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အရသာတွေ့နေရသည်.။ “ ဖွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်…. နော်...” မွှေးမွှေးတစ်ကိုယ်လုံး တုန်သွားသည်.မသိန်းရီကြီးနဲ့ အဖေ နဲ့….....အမေ့….” “ အော်…ရှင်ပဲ နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြား ခေါ်ခေါ် လိုးနေတာကိုး…..“ ဖွတ်…ပြွတ်…ဖွတ်….။ မွှေးမွှေး အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ အိမ်ရှေ့တံခါးက ပိတ်ထားသဖြင့် အိမ်ထဲသို့ဝင်ရန် နောက်ဖေးတံခါးများ ဖွင့်ထားမလားဆိုသော အတွေးဖြင့် အိမ်ဘေးမှ ပတ်ကာ နောက်ဖေးဖက်သို့ အလာ အထဲမှ မိန်းမအသံလိုလို ကြားသဖြင့် ပြူတင်းပေါက်ဘေးသို့ ကပ်၍ ကြည့်လိုက်မိသည် ...။ လေးဘက်ကုန်းပေးထားသော မသိန်းရီ၏ ဖင်ကြီးကို ဦးမြင့်စိုးက နောက်မှ ဒူးထောက်ပြီး လိုးနေသည်.” “ ဟဲဟဲ.အ…အမေ့…” လိုးချက်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက် အရောက်တွင် သိန်းရီတစ်ကိုယ်လုံး အကြောတွေ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့် ဖြစ်လာကာ တင်ပါးကြီးတစ်ခုလုံး ကျုံ့တင်းသွားပြီး သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည် .စတာပါကွာ…” .ပြွတ်…..။ ထမီက အခန်းတောင့်တွင် ပုံလျက်သားလေး ရောက်လို့နေသည်.
ပြွတ်…..ဘာချောင်းနေတာလဲ…” “ အမေ့….“ ဖွတ်…ပြွတ်….ကျွတ်…..တအားဆောင့်နေတော့တာပဲ…” သိန်းရီ၏ အသံက တုန်တုန်ရင်ရင် တိုးတိုးလေး…။ “ ဒီလို ကုန်းပြီး လိုးတာ …မြန်မြန်ပြီးတယ်…သိလား…” “ ဒါဆို…ဖယ်တော့ ကျမ လှန်ပေးမယ်….ဖွတ်…..ဗြစ်…ဒုတ်…” “ အင့်.။ မွှေးမွှေး အံ့သြသွားသည်..ဘွပ်….အို…...” သိန်းရီက ပက်လက်လှန်ကာ ခြေနှစ်ချောင်း မြှောက်ပေးလိုက်သည်..။ သိန်းရီ၏ ဖင်ကြီး ပြားပြားကျသွားအောင် ဆောင့်လိုးနေပုံမှာ ဂွေးဥကြီးများပင် ကျုံ့ကျုံ့ဝင်သွားအောင် ပြင်းထန်လှသည်..ကျွတ်.အ… ဟင့်…” မွှေးမွှေးချောင်းကြည့်နေရာမှ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးကို လက်ဝါးနှင့် အုပ်ဖိထားမိသည်.ဖြေးဖြေး လုပ်စမ်းပါရှင်…ဒီမှာ ဆံပင်တွေ ပြေကျကုန်ပြီ… တစ်ခါတဲ.။ “ ဟေ့…....” “ အင့်.အင့်……ကောင်း….။ မသိန်းရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အလွန့်အလွန် ကြီးမား ဖောင်းကား၍ နေသည်....အင်း….။ “ ဖွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…..ဆောင့်.ဖွတ်….” အပြင်မှ အသံကြား၍ အထဲမှ ငြိမ်သွားသည်.ကိုလှကျော်…..။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှ ပြူအစ်ထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဦးမြင့်စိုးက ရိုးရိုးမလိုး ၊ သိန်းရီ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူကာ ဖြဲပေးခိုင်းသည်.။ ဆွဲဖြဲလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားကြီးတွေက နီရဲ၍ ထွက်ပေါ်လာသည် .ပလွတ်…ပြွတ်…..။ ဖြစ်နိုင်လျင် သူမကို အခုနေ တစ်ယောက်ယောက်က လာပြီး လိုးစေချင်မိသည်...။ ဦးမြင့်စိုး လီးထိပ်ကြီးက နီရဲနေသော်လည်း လီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးကမူ မဲပြောင်နေသည် .ခပ်သွက်သွက်လေး…ဆောင့် စမ်းပါ…အင့်….။ အထဲမှ ယားကျိကျိ ဝေဒနာကို ခံစားနေရသည်.။ .
နင့်ကို လိုးချင်နေတာ ..။ .... နင် ချောင်းကြည့်တာတော့ ချောင်းကြည့်တာပဲ မို့လား..။ အထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး ထိုင်ချလိုက်ကြသည်....။ မွှေးမွှေး စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမ၇ချင်တော့ပေ..။ “ ငါ…. နင့်အဖေ သိရင် မလွယ်ဘူး…” “ ဟို…ကျမ မထင်မှတ်ပဲ တွေ့တာ…” “ အေးလေ. ဘယ်အချိန်ထဲက ကြည့်နေတာလဲ…” “ အို…..ချောင်းကြည့်နေတာ .။ တစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်သော စကားက မွှေးမွှေး၏ ကိုယ်ထဲမှာ တောက်လောင်နေသော ရာဂမီးကို ဓါတ်ဆီဖျန်းပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်.။ စောစောကထဲက အရေလေးများ စိုစိစိဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြားမှ အရေများက တားမရဆီးမရ ထွက်ကျလာပြီး ထမီလေးကို စို၍ကွက်ကုန်သည်....” ပါးစပ်က ကြမ်းလှသည်...။ အုတ်ကန်အဟောင်းလေးမှာ နံရံ တစ်ဖက်ပျက်စီး ပြိုကျနေ၍ ဝင်ရထွက်ရ လွယ်သည်..” မွှေးမွှေး ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိ၊ ခေါင်းငုံ့ကာ နေလိုက်သည်..။ မွှေးမွှေး ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်သည်.။ “ နင်…သူတို့လုပ်နေတာ....။ အိမ်နောက်ဖေး ရောက်တော့ အုတ်ကန်အပျက်လေးထဲ ဝင်၍ ပုန်းလိုက်ကြသည်..ခံပါနော်..။ လှကျော်၏ လက်တစ်ဖက်က မွှေးမွှေး၏ စောက်ဖုတ်နေရာကို စမ်းပြီး ပွတ်သပ်လိုက်ပြန်သည် .။ လှကျော်က ထိုနေရာလေးကို ခပ်ဖိဖိလေး ဖိပွတ်လိုက်ရာ စောက်စေ့ထိပ်ကလေးကို ပွတ်မိသွားရသည် ....။ လူတစ်ကိုယ်စာ ပြိုကျနေသော ရေကန်နံရံပေါက်အား လှကျော်က ကျောပေးပြီး ပိတ်ထားသည်.။ ရုတ်တရက် ထပြေးဖို့က မလွယ်..။ မွှေးမွှေး တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်ဖြစ်လာသည်. ကြာလှပါပြီ…မွှေးမွှေးရာ…တစ်ခါထဲပါဟာ.” လှကျော်များ ပြန်ပြောမလားလို့ မွှေးမွှေး စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ် ဝင်လာသည်.။ “ နင်.” လှကျော်က မွှေးမွှေးလက်ကိုဆွဲ၍ အိမ်နောက်ဖေးသို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်.“ လာ… လာ… တွေ့သွားရင် မကောင်းဘူး.။ ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်ကာ ဒူးလေးနှစ်လုံး ပူးကပ်ထားသော မွှေးမွှေး၏ တင်ပါးကြီးများကို လှကျော်က ဖွဖွလေး လှမ်းပွတ်ပေးသည်.
နော်…” မွှေးမွှေး ကိုယ်လုံးလေးကို ဖြေးဖြေး တွန်းလှဲလိုက်သည်..“ အာ….” မွှေးမွှေး ဖင်လေးကို ဆတ်ခနဲ ယောင်ပြီး ကြွလိုက်မိသည်.။ လှကျော် ကိုယလ်ုံးကြီးက မွှေးမွှေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ပေါ်၌ ခွလျက်သား ဒူးထောက်လိုက်သည်. မလုပ်ပါနဲ့…တောင်း…တောင်းပန်ပါတယ်.။ ဒေါသနှင့် လှကျော်လက်ကိုလည်း ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်ပြန်သည်....” မွှေးမွှေး တံတွေးမျိုချပြီး နဖူးဆံစပ်လေးများ ၌ ချွေးလေးများ စို့လာသည် ...ကျမ ကို .လက်.။ မွှေးမွှေး ကြောက်လန့်သွားမိသည်..။ “ ကျ….။ “ ကိုယ်အရမ်း လိုးချင်နေပြီ…မွှေးမွှေးရယ်.။ ခြေထောက်ကလေးများ ကွေးထားရာမှ ဆန့်သွားသည်..။ ဒူးနှစ်လုံးကို ပိုက်ထားသော သူမ၏ လက်လေး ပြေကျသွားသည်..။ “ လိုးကြရအောင်ကွယ်….။ မွှေးမွှေး ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်..။ ယုန်သူငယ်လေးလို တောင်းပန်နေရှာသည်.....။ လှကျော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သူမပေါ်သို့ ပြိုကျလာသည်..။ “ မင်း စောက်ဖုတ်လေးကို တစ်ခါပဲ လိုးရရင် ကို သေပျော်ပါပြီ…မွှေးမွှေးရယ်.။ မိန်းမတွေ ဒီလိုပဲ မူတတ်သည်ဆိုတာ လှကျော်က သိပြီးသား ဖြစ်သည်..” “ သေလိုက်ပါလား…” တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် ဘာပြန်ပြောမိမှန်းပင် မသိ..ကျွတ်…...” လှကျော်က မွှေးမွှေး၏ လက်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဆွဲဖယ်လိုက်သည် .။ “ ဖယ်စမ်းပါ…...။ လှကျော်၏ ရင်ဘတ်ကြီးကို .။ သူမ၏ အသိစိတ်တွေ ဝေဝါးထုံထိုင်းကုန်ပြီ.။ နို့မာမာလေးများကို မိမိရရ ဆွဲညှစ်သည်.” ဖင်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အုပ်ဖိထားရင်းမှ မွှေးမွှေးမျက်လုံးထဲမှ မျက်ရည်များ စီးကျလာသည် ...။ မွှေးမွှေး မျက်လုံးတွေ ပြာဝေလာသည်..
.။ ပုဆိုးတွင်းမှ မာကျောကျော ပစ္စည်းကြီးက မွှေးမွှေး၏ ဆီးခုံလေးကို ဖိထောက်မိလာသည်.။ သူ့ပုဆိုးအောက်စကိုလည်း ဆွဲမလိုက်သည်..။ ယောက်ျားဆိုသော အရသာနှင့် ထိတွေ့လိုက်သော မွှေးမွှေး၏ သွေးသားများ ဆူပွက်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး ရမ္မက်အပူလှိုင်းကြီးက စိုးမိုးလွှမ်းခြုံထားလေပြီ .။ လီးထိပ်က စောက်ဖုတ်အဝလေးသို့ ပူနွေးစိုအိစွာ တေ့ကပ်မိသည်.။ မညှာမတာ အလောသုံးဆယ် လိုးသွင်းလိုက်သော လီးထိပ်ကြီးက စောက်စေ့ထိပ်လေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖိတွန်းသွားခြင်းကို ခံလိုက်ရသောကြောင့်…မွှေးမွှေးတစ်ယောက် ပေါင်ရင်းမှ စ၍ ခြေသလုံးသား ခြေဖဝါးအစုံထိ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ခံစားလိုက်ရသည်....ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…မချွတ်ဘူး…” “ကျွတ်….။ လေတိုးသံမှ အပ .။ မွှေးမွှေး ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ခံစားလာရသည်.။ မွှေးမွှေး အံကြိတ်ရင်း မျက်နှာလေးကို တစ်ဖက်သို့ စောင်းထားလိုက်သည် ..ဘွပ်….။ သူမ၏ ပါးနှစ်ဖက်မှာလည်း ရှိန်းကနဲ နွေးပူသွားသည်.အား…” မွှေးမွှေး နှာခေါင်းလေးရှုံ့၊ မျက်နှာလေး ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်သွားသည်.။ လှကျော်က နွေးအိသော ရင်သားလေး နှစ်မွှာအထက်၌ ဖိကပ်ထားသော သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား မကြွပဲ လက်တစ်ဖက်ကို ဖင်နှစ်ခုကြားသို့ နှိုက်လျှိုပြီး သူ့လီးကို ကိုင်ကာ မွှေးမွှေး၏ စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ တေ့ထောက်လိုက်သည်..။ ထို့ နောက် မွှေးမွှေး၏ ပခုံးလေးကို စုံကိုင်ဆွဲကာ ဖင်ကြီးကို ဖိ၍ လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်...ကဲကွာ…” လှကျော်က ထမီအောက်စကို အတင်းဆွဲလှန်လိုက်သည်.။ မွှေးမွှေးက ကယောင်ကတမ်းဖြင့် အသက်ရှူမြန်မြန်နှင် လှကျော် လက်မောင်းကို တအားညှစ်၍ ကိုင်ထားလိုက်မိသည် .” “ အ…....။ နွေးထွေးသော အရေပြားပေါ်သို့ လီးထိပ်က ထိမိလိုက်သည်…။ မွှေးမွှေး အင့်ကနဲ တွန့်သွားသည် ..ဆီးတွန်းထားလိုက်သော မွှေးမွှေး လက်လေးတွေက တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ “ဗြစ်… ဖွတ်….။ တရှိန်ထိုး ဝင်သွားသော လီးကြီးက အထဲသို့ တစ်ဝက်ခန့်အရောက် မွှေးမွှေး၏ ထိတလ်န့်တကြား ညှစ်လိုက်မှုကြောင့် ညှပ်သွားသော စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်း ကြား၌ တစ်ဆို့ဆို့ ဖြစ်သွားသည်.အ………..။ လှကျော်က လီး နေရာချပြီးသည်နှင့် သူ့လက်ကို ဆွဲ၍ နှုတ်လိုက်သည်.။ လှကျော်၏ လက်နှင် မွှေးမွှေး၏ စောက်မွှေးအုံတို့ ဖိပွတ်မိကြသည်...။ “ ထမီ ချွတ်လိုက်နော်…မွှေးမွှေး…” “ အို…..
ဖွတ်…..ဗြစ်…..။ “ အို့….” “ အိုး….အင့်…..ဘွတ်…ပလွတ်…..။ ခပ်ကြပ်ကြပ် စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးမို့ လိုးရသည်မှာ လှကျော်အဖို့ မကြုံဖူးအောင်ပင် အရသာတွေ့နေသည်.” မွှေးမွှေး၏ မျက်နှာလေး ရဲရဲ နီလာသည်..။ “ ပလွတ်….။ လှကျော်က တစ်သက်လုံး အရိပ်တကြည့်ကြည့် ဖြင့် လိုးချင်နေခဲ့ရသော မွှေးမွှေးကို တကယ်လိုးနေရပြီမို့ အသားကုန် လိုးနေသည်.အ…….အင်း…ကျွတ်…ကျွတ်….ဟင်း….ဖွတ်…..။ လှကျော်က ဒူးထောက်ထိုင်ရင်းက မွှေးမွှေး၏ စောက်ဖုတ်ကို ငုံ့ကြည့်ကာ လီးအဝင်အထွက်ကို စိမ်ပြေနပြေ ကြည့်ရင်းလိုးသည်..။ ဖောင်းနေသော ပါးပြင်ဖွေးဖွေးလေးများ မှာ တဆတ်ဆတ် ခုန်နေသည်..ကျွတ်……” တစ်ခါတစ်ရံ မွှေးမွှေး၏ လက်လေးအစုံက လှကျော်၏ ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားတတ်သည် ....။ ..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကြီး ပြန်ထတ်ုလိုက်လေတိုင်း စောက်ပတ်လေးထဲမှ အတွင်းသားရဲရဲလေးများ ပြဲကနဲ ပါပါလာသည်..။ ဖူးယောင်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြီး နှစ်ခြမ်းက တင်းတင်းကြီး ကားနေရာ လီးကြီး လိုးသွင်းလိုက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းသားများက လိပ်လိပ်ဝင်သွားသည်.အ…အင့်…” “ ကောင်းလိုက်တာ…မွှေးမွှေး ရယ်……” လှကျော်က မချိမဆန့် အသံမျှင်းမျှင်းနှင့် ပြောရင်း သူ့ဖင်ကြီးကို ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖိဆောင့်ကာ ကပ်ထားလိုက်ပြီး သုတ်ရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်.ဖွတ်…...ဟင့်…..ဖွတ်…….။ သို့သော် လှကျော်က သုံးလေးချက်မျှ ဖင်ကိုစောင်း၍ ကန့်လန့်လေး လိုးသွင်းခြင်း ခံလိုက်ရသောအခါ မွှေးမွှေး၏ လက်များက လှကျော်၏ ခါးကို အတင်းဖက်ထားလိုက်မိတော့သည် ...ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး နေ့ခင်းကြောင်တောင် ခြောက်ခြားနေသည်.အိုး…...အမလေး…လေး.ဗြစ်…ဒုတ်….ကျွတ်.အစ်ကိုရယ်…ဟင့်..ဖွတ်…” “ အင့်..” “ အင်း…ဟင်း….။ “ ဖွတ်….
.net)မှယူးယူပြီး PDF ဖိုင်ဖန်တီးပေးလိုက်သည်။ (ဒေါက်တာချက်ကြီး) ( http://achittatkatho..။ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ပြီးပါပြီ.ထိုအခိုက်မှာပင် အင့်ကနဲ တစ်ချက်ငြီးကာ မွှေးမွှေး မျက်နှာလေး မော့တက်သွားပြီး သူမ၏ ခါးလေးမှာ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ ဖြစ်သွားရပါလေတော့သည်.။ ဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူအောင် ( http://achittatkatho.net) အချစ်တက္ကသိုလ် .
Documents Similar To 75425298-အသက်ငယ်ငယ်-ရမ္မက်ကြွယ်
20Dec09 In the End (Short Novel) by Khin Ma Ma Myo
A NaitaMyit Heart Beat
MaMa Goe Let Tway. Pyit Hmarr Lite Tar Par